Al-Shabab oo la sheegay in ay doonayso kala qaybinta Kenya – Radio Daljir
Abriil 4, 2015 11:39 g 0
Sabti, Abriil 04, 2015 (Daljir) —Iyadoo Al-shabaab ay maanta oo Sabti ah ku hanjabtay in ay Kenya ka geysan doonto weerarro kale oo uu dhiig badan ku daato, kaddib markii ay Khamiistii weerareen Jaaamacadda Gaarisa halkaas oo ay ku dileen 147-qof, ayaa waxaa ka jawaabay guddoomiyaha Gaarisa, Nadiif Jaamac ayaa hanjabaadda cusub ee Al-shabaab ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin.
Nadiif Jaamac ayaa ku eedeeyay Al-shabaab inay doonayaan inay shacabka Kenya iska horkeenaan iyagoo adeegsanaya hannaan ah inay u kala saaraan shacabka Kenya muslim iyo masiixi.
“Arrinta la yaabka leh waa ficillada Al-shabaab oo marka ay Somalia joogaan dilaya dadka muslimiinta ah, marka ay Kenya soo weeraraanna ay sheegaan inay dilayaan dadka aan muslimka ahayn. Tanina waa xeelado cusub oo ay ku sameysanayaan ganacsi,” ayuu yiri Nadiif Jaamac.
Sidoo kale, Jaamac ayaa sheegay in xaqiiqada arrintan ay tahay qorshe ay ku doonayso inay shacabka Kenya u kala saarto Muslimiin iyo Gaalo si ay u dagaalamaan, isagoo xusay inaysan taasi dhici doonin; balse ay la dagaali doonaan Al-shabaab iyagoo wadajira.
Al-shabaab oo bayaan kasoo saartay weerarkii ay Jaamacadda Gaarisa ku qaadeen; ayaa sheegay inay u weerareen jaamcaddaas dhibaatooyinka ay ka geysanayaan gudaha Somalia iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee Kenya ku nool; ayna weerarro kale ku qaadayaan dalka Kenya.
Dhanka kale, Hoggaamiyaha mucaaradka CORD ee Kenya, Raila Odinga ayaa xusay in la joogo xilligii ay shacabka Kenya oo dhan u midoobi lahaayeen dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagaxisada ah.
Odinga ayaa intaas raaciyay in dowladda Kenya looga baahan yahay inay wax badan ka bedesho hannaanka la dagaalanka argagaxisada, wuxuuna ku eedeeyay xukuumadda in aysan sidii looga baahnaa xoogga u saarin sidii ay u sugi lahayd ammaanka.
Si kataba ha ahaatee, weerarkii Jaamacadda Gaarisa ayaa soo jiitay indhaha caalamka oo dhan, iyadoo hoggaamiyeyaasha caalamka qaarkood iyo kuwa Soomaaliya ay si adag u cambaareeyeen weerarkaas.